तिमी मसँग किन कुरा गर्दैछौ? | Martech Zone
तिमी मसँग किन कुरा गर्दैछौ?
लक्षित अटो प्रतिक्रिया जुन म चाहन्छु कि म ईमेल, सामाजिक नेटवर्कहरू र माइक्रो-ब्लगहरू मार्फत प्राप्त गरेको सबै अनावश्यक संलग्नताहरूको लागि छोडिदिन।
म तिमीलाई चिन्दिन। गम्भीरतापूर्वक। तिमी मसँग किन कुरा गर्दैछौ?
तिमीले मलाई कसरी भेटायौ? के मैले तपाईंलाई मेरो अनुमति दिए?
के मैले तपाईंलाई भनेको थिएँ कि म तपाईंको उत्पादन वा सेवामा इच्छुक छु?
के तपाईं मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ किनकि तपाईंले गर्नु भएको थियो? केहि पनि प्रासंगिक हुन सक्छ?
के तपाइँ वास्तवमै मलाई को हो भनेर थाहा छ वा मेरा आवश्यकताहरू के हुन्? तपाईंले सोध्नु भयो?
के तपाईंले आफ्नो सन्देश सरल गर्नुभयो ताकि म यस मार्फत स्क्यान गर्न सक्छु र यदि इच्छुक छु भने मार्फत क्लिक गर्नुहोस्?
के तपाईंले मलाई कुरा गर्नबाट रोक्नको लागि एक तरिका प्रदान गर्नुभयो?
मसँग धेरै समय छैन। म सबै दिन ईमेल, सामाजिक नेटवर्कहरू, वा माइक्रो-ब्लगि spendमा खर्च गर्न सक्दिन ... मलाई एक्लै छोड्नुहोस्। मलाई मेरो काम गरौं।
गम्भीरतापूर्वक। म वास्तवमै गम्भीर छु। मलाई एक्लै छाडिदेउ।
टैग: गतिशील फोन नम्बरहरूमार्केटिंग add-onsफोन ट्र्याकिंगटोली भवन
स्लाइड सेयर, फेसबुक र लिंक्डइनको साथ तपाईंको स्लाइडहरू साझेदारी गर्नुहोस्
आदिवासीहरूको साथ समस्या ... एर ... विजेट
नोभेम्बर २०, २००। 22::2008 अपराह्न
वाह .. आज केहि शत्रुतामा .. तर, के म यसलाई कहिले प्रयोग गर्न सक्छु ??
पक्कै! म अल्छी बजारमा मात्र शत्रु हुँ। 🙂
हामी सबै, हरेक क्षण, प्रति बल केमा ध्यान केन्द्रित गर्ने छनौट गर्नुहोस्।
तपाइँ यहाँ केन्द्रीत हुनुभएको छ भन्दै।
बस कि ... यहाँ कुनै परिष्कार छैन।
नोभेम्बर २०, २००। 23::2008 अपराह्न
म यो ट्विटर अटो उत्तरकर्ताहरूको लागि प्रयोग गर्न चाहान्छु